Cameron.....: ကြက်သားငြုတ်သီးကြော် နဲ့ ငွေနှင်းမှိုကြော်
yanpaing yannaing yummy :-)
လုပ်နည်းကိုကျော်ဖတ်ပြီး (ဖတ်လဲမထူးးဘူးလေ. လုပ်မှာမှ မဟုတ်တာ. လုပ်ပြီးသားလေးဘဲ ရှုစားသွားတယ်။ တစ်နေ့ပေါ့ကွယ်............)
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဟင်းချက်နည်းလောက်နဲ့ လုံးးးးးးဝ
ငရုပ်သီးကို အဲလိုလေး ကြော်တာ ကြိုက်တယ်
အိုး ဗိုက်ဆာလာပြီ ထမင်းသွားစားတော့မယ်
မီးဖွင့်လား ကြော်တော့ ... နောက်တာ
ရှလွတ်... သရေလာကျသွားတယ်.. :D
ကြက်သား ငရုတ်သီးကြော်ရော၊ မှိုကြော်လေးပါ စားသွားတယ် မမိုးငွေ့း))
မြင်ရမြင်ရ မကြင်ရပါကလားကွယ်...သွားရည်ကျပြီး ပြန်သွားပါ၏...
yummy . . . sha looot :))))
မနှင်းဆီမူပိုင်ရှင်တို့များ တစ်ယောက်တည်းမလာဘူး ရန်ပိုင်တို့ ရန်နိုင်တို့ညီအစ်ကိုအပြင် ရန်မီဆိုတာသူတို့ညီမထင်တယ် အမျိုးတွေပါခေါ်လာတယ်..။ အိမ်မှာမီးခိုးတိတ်ပဲထင်တယ်..။
အင်းးး ဆရာမရယ် ချက်သာချက်သိလား
ဒီမှာလဲ နေမကောင်းတော့လာလာကြည့်ပြီးသွားရေကျနေရတား(
ဟုတ်တယ် မိုးငွေ့ရေ။ 'တတ်ပြီးပညာ မလေ့လာ မကြာမရှည်ပျောက်တတ်သည်' တဲ့။ အခုလိုလေး ချက်ထားတော့လည်း စားကောင်းမယ့်ပုံလေးမို့ အားပေးသွားတယ်နော်။
25 October 2011 at 02:13
စားကောင်းမဲ့ပုံဘဲ သိပ်လဲမခက်ဘူး ချက်စားကြည့်ဦးမယ်...
27 October 2011 at 02:15